Ndekupi kwaungasimudzira mahwanda mukati meMoscow?
MuMoscow, kunyanya mukatikati, zvakaoma kuwana mahani ekupaka. Kazhinji yaibhadhara kupaka. Pakupera kwevhiki uye mazororo omusangano muMoscow yokupaka kune rusununguko kumativi emigwagwa. Uye zuva rakabuda rinoonekwa seSvondo chete. Iko kune zviratidzo zvezvipfeko zvakadaro, izvo zvinoreva kuti hapana mhanho pamusi weSvondo. Iwe unogona kutsvaga muzvivanze, asi vagari vomunharaunda vari kuwedzera kuisa zvipingamupinyi pamasuo, kuitira kuti parege kuva nomunhu angamira paanotsvaga pokupaka pasina uye asingatore nzvimbo yeumwe munhu. Zvakanaka, uye zvakadaro, sechinhu chisarudzo, unogona kuwana quot; Resident Permitquot; kana uri mugari weguta. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kupaka kwako kuchava kusununguka chero kupi zvako.
Zvinonetsa, asi zvinogoneka. Kushamba kwepachena pakati peguta guru redu kunogona kuswedera pedyo nezvikoro uye zvipatara. Hapana munhu anogona kuona kana iwe uri mushandi kana muenzi kune aya masangano kana kwete. Asi zvakakosha kukuyeuka kuti basa rekupaka nzvimbo yezvivako izvi rinonyatsoenderana nehana yako.
Ndinoziva nzvimbo pedyo nenzvimbo yakakwirira-yakasimuka paKotelnicheskaya Embankment pedyo nenzvimbo yakakwirira-yakasimuka. Iyi ndiyo chaiyo muganhu we ring ring boulevard.
Mukati mein'i ye boulevard kune nzvimbo isina nzvimbo yekuisa pasina. Chikamu chekubhadhara nzvimbo dzekuisa nzvimbo inopiwa yekusununguka kwekupakira vanhu vakaremara. Kubva ku1 May 2014 achabvumirwa kupakira pasina rusununguko pakati pekupera kwevhiki uye mazororo evanhu vose.
Ndaigara ndichigadzirira mahwindo paKinlev Boulevard pakati peTrubnaya Square (pane nzvimbo yakakwana). Ndiri kufunga iye zvino kune mubhadharo wakabhadhara.
Hapana chinetso chokuwana kupaka mushure meJardin Ring.
Mhedzisiro yekubhadhara mitemo yekupaka haifaniri kushanda kumakamuri.
Nzvimbo uye nzvimbo yepaki yekubhadhara inofanira kuve yakagadzirirwa zvakakodzera, zvinoreva kuti zviratidzo zvinofanira kuvapo. Vafambisi vanotungamirirwa navo kana vakapinda munharaunda yekubhadhara mari. Ingoyeuka mupfungwa dzako kuti ikozvino iyo yakabhadharwa yekupaka nzvimbo iri kunze kweJindu Ring, uye nekuisa motokari pasi pembiru isina chinhu, paunodzoka, unogona kuwana pairi chiratidzo cheti;
Kupaka motokari pakati peMoscow kunogona kuwanikwa pedyo nezvipatara uye temberi. Iwe unogona kutarisa ikozvino kupaka mukati, iyo yausingadi kubhadhara, uchishandisa iTunes ParkApp application. Kana iwe uine mvumo yekugara muhombe kana iwe une dzimba pano, iwe unogona kuwana nzvimbo yekugara yemotokari kubva kuMFC. Izvi zvichakupa mukana wekupakira pasina mukati pakati peMoscow munharaunda yekubhadhara mari. Ichokwadi chinofanira kubhadhara 3000 rubles yegore. Mahara mahara maawa ekupedza iri kurongwa kubva ku8 manheru kusvika ku8 mangwanani. Uyewo paSvondo uye mazororo evanhu vose, kupaka mukati meMoscow kunosununguka.
Mibvunzo ye61 mu database yakagadzirwa mu 0,338 masekondi.